तपाईंलाई थाँहा थियो? Graton फन तथ्यहरू! - Graton
तपाईंलाई थाँहा थियो? Graton फन तथ्यहरू!
फ्रेभुअरी २ 26, २०२१
तपाईलाई हाम्रो सम्पत्ती कत्तिको थाहा छ? तपाईं मध्ये कोही यहाँ बारम्बार आगन्तुकहरु हुन सक्नुहुन्छ र तपाईहरु कोही बिल्कुल नयाँ हुन सक्नुहुन्छ (नयाँ साथीहरुलाई स्वागत छ!)। आज, हामी केहि विवरणहरू, सुविधाहरू, र Graton का गुणहरू साझा गर्न चाहन्छौं जुन तपाईं धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। एक चोटी लिनुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईंलाई हाम्रो Graton फन तथ्यहरू केहि थाहा छ!
के त्यो पुरानो भनाइ चलेको छैन? Graton सबै उत्तरी क्यालिफोर्निया मा सबै भन्दा ठूलो क्यासिनो हो। १ 135,००० वर्ग फुट भन्दा बढी गेमि space स्पेसको साथ, मनोरन्जनका अवसरहरू अनन्त छन्। त्यसलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्नका लागि २ 28 एनबीए रेगुलेसन आकारको बास्केटबल अदालतहरूको लागि पर्याप्त कोठा छ। स्टेफ करीसँग त्यस्तै ठाउँमा शटहरू उठाउन धेरै रमाइलो हुन्छ!
हाम्रो गेमि space स्पेसमा, त्यहाँ 3, 3,०० भन्दा बढी स्लटहरू र १०० टेबल गेमहरू छनौट गर्न सक्छन्। यदि तपाईं विविधता चाहनुहुन्छ भने, अगाडि नहेर्नुहोस्। हामीले प्रस्ताव गरेको प्रायः सबै खेलहरू हेर्नको लागि, यसले हाम्रो पूरै गेमिंग स्पेसमा हिंड्न अनुमानित 45 45 मिनेट लिन सक्दछ (कृपया ध्यान दिनुहोस्, हाम्रो टोलीका सदस्यहरू कुनै पनि पाहुनाहरूलाई स्फूर्ति प्रदान गर्न खुशी छन्) जुन बाटोमा थकित हुन्छन्)।
तपाईं हामी संग रहनुहुन्छ जब Lavishly प्रत्यक्ष
त्यहाँ जम्मा 200 कोठा छन्; जसमध्ये १ su सुइटहरू हुन्। हामीले प्रस्ताव गर्नु पर्ने सुइटहरू मध्ये, हाम्रो5बे क्यालिफोर्नियाको पक्कै पनि भव्य परिभाषा हो। २,6०० वर्ग फिटमा, तपाईं सैद्धांतिक तवरले घर भित्रै बस्न सक्नुहुन्छ! क्यालिफोर्निया सुइट बिलियर्ड टेबलदेखि बटलर पन्ट्री फर्निचरसम्म विलासितापूर्वक आरामदायी राजा आकारको ओछ्यान, विशाल जेट टब र अधिक सुविधाहरूसँग सुसज्जित छ! यद्यपि त्यहाँ एक सुविधा छ जुन तपाईंलाई कहिँ भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ ... प्रत्येक शौचालय मिरर टिभीमा फिट गरिएको छ! साँझको लागि तयार भइरहेको बीचमा आफ्नो मनपर्ने कार्यक्रमहरू समात्न बैठक कोठामा भाग्नुपर्दैन!
हामी प्रेम, प्रेम, प्रेम घटनाहरू
अनुसन्धान र आर
कसले थोरै तनाव जारी गर्न आवश्यक छैन? २०१ 2016 मा यसको शुरुवात भएदेखि, आगन्तुकहरू आराम र रिचार्ज गर्न हामीसँग चारैतिरबाट सामेल भए। सामान्य अपरेशनको बखत, हाम्रो स्पा र सैलुनमा तीसवटा विभिन्न उपचारहरू मध्येबाट छनौट गर्न सुविधाहरू छन्, ताकि पाहुनाहरू पूरा समय प्याम्पर्स वा अझ बढी समयको मजा लिन सक्छन्। गम्भीरतापूर्वक, यो हाम्रो मेनू मा उपलब्ध हरेक उपचार आनन्द लिन लगभग सत्तरी घण्टा वा लगभग नौ दिन लाग्छ!
आराम प्रत्येक सेवा भन्दा पहिले सुरू हुन्छ। सबै आगन्तुकहरूलाई उनीहरूको उपचारको तयारीको लागि चाँडै नै आउन प्रोत्साहित गरिन्छ जुन हाम्रो स्टीम रूम, रेडवुड ड्राई सौना, आइस कोठा र हट टब समावेश हुने सुविधाहरूसहितको अत्याधुनिक हाइड्रो क्षेत्रको फाइदा लिई उनीहरूको उपचारको तयारीको लागि तयारी गर्न। आइस कोठामा द्रुत शीतल भएकोले र तातो टबमा भिजेको छ, सम्पत्तीमा यो एक मात्र क्षेत्र हो जुन हिउँदबाट हिउँदमा लाग्न सक्छ ग्रीष्म vibतुमा तुरुन्तै महसुस हुन्छ।
तपाईंले कति रमाईलो तथ्यहरू थाहा पाउनुभयो? हामी आशावादी छौं कि तपाईले हामीबारे र Graton रिसोर्ट र क्यासिनो अनुभव गर्नका लागि बिभिन्न तरिकाहरूबाट केहि बढी सिक्न रमाईलो गर्नुभयो। चाहे तपाई नयाँ वा फर्किने आगन्तुक तपाई हाम्रो साथी हुनुहुन्छ र हामी तपाईलाई छिट्टै भेटौं आशा गर्दछौं।